Gool Dhaliyaashii Ugu Fiicnaa Iyo Kuwii Liitay Chelsea Ee Laga Soo Bilaabo 2000kii Oo La Qiimeeyay. – Gool24.Net
Gool Dhaliyaashii Ugu Fiicnaa Iyo Kuwii Liitay Chelsea Ee Laga Soo Bilaabo 2000kii Oo La Qiimeeyay.
15/05/2020 Mahamoud Batalaale
Chelsea waxaa u soo ciyaaray gool dhaliyaal aad u badan oo qaar ka mid ahi yihiin xidigo heer caalami ah oo taariikhda kubbada cagta baal dahab ah kaga jira balse waxaa Blues soo maray gool dhaliyaal fashil kaga huleelay Stamford Bridge.
Qiimayn lagu sameeyay gool dhaliyaashii Chelsea ee laga soo bilaabo sanadkii 2000 kii ayaa muujinaysa sida ay weerar yahanadii Blues u soo maray ay u kala duwanaayeen.
Magacyada waa wayn ee weerarka Chelsea ka soo ciyaaray intii lagu jiray qarnigan 21 aad waxaa ka mid ahaa min Hernan Crespo, Andriy Shevchenko, Didier Drogba, Fernando Torres ilaa Alvaro Morata.
Qiimaynta gool dhaliyaasha Chelsea waxaa shardi u ah laba arimood, mida hore waa in ay gool dhaliyaashani yihiin kuwo kooxda Blues u soo ciyaaray ugu yaraan 10 kulan ama ka badan iyo in ay ahaayeen kuwii kooxda ka soo muuqday laga soo bilaabo 20000 kii.
Marka labada arimood ee aan soo sheegnay la eego waxaa muddadan Chelsea u soo ciyaaray 25 gool dhaliye laakiin waxay ku kala jiraan laba darajo oo ah qaar guulaystay iyo kuwo fashil la kulmay halka ay jiri karaan kuwo meel dhaxaad ah balse labada qaybood la kala raaciyay.
22. Mikael Forssell
21. Carlton Cole
19. Mateja Kežman
16. Loïc Rémy
15. Demba Ba
14. Andriy Shevchenko
Waa mid ka mid ah magacyadii waa waynaa ee Chelsea ku soo biiray balse ayna hibadiisu ku haboonaan Stamford bridge. Waxa uu Chelsea u ciyaray 77 kulan oo uu ku dhaliyay 23 gool oo kaliya kadib markii uu kooxda ugu soo biiray 30.8 milyan gini.
Waxay Chelsea kula soo wareegtay 50 milyan gini kadib markii uu laf dhuun gashay kooxdeeda ku noqday ee waqtigii uu Liverpool joogay laakiin Torres ayaan qaab ciyaareedkiisii Reds u soo min guurin Stamford Bridge.
Inkasta oo uu 45 gool u dhaliyay Chelsea, haddana lacagtii lagula soo wareegay iyo wixii laga filayay marka loo eego ayuuna Torres gaadhin heerkii laga filayay balse waxa uu ku jiraan gool dhaliyaashii ugu fiicnaa Blues ee qarnigan.
Da’yarka Abraham oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Chelsea qaadanaya ayaa si layaableh kaalinta lixaad uga galay gool dhaliyaashii Chelsea ee qarnigan ugu fiicnaa.
Abraham ayaa 15 gool ku soo dhaliyay 34 kulan xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Chelsea wuxuuna si layaableh u soo dhaafay gool dhaliyaan Blues ku soo fashilmay.
4. Eiður Guðjohnsen
Chelsea ayaa Costa kula soo wareegtay 32 milyan gini laakiin waxa uu markiiba noqday gool dhaliye Blues ay kaga nasatay weerar xumadii kooxdeeda laakiin wanaagii uu Chelsea u hayay waxaa burburiyay Antonio Conte.
Markii ay Conte iyo Costa isku dhaceen waxay maamulka Chelsea awoodi kari waayeen in ay xal nabad galyo ah ka dhex abuuraan waxayna taas badalkeeda dhinaca saareen Costa taas oo keentay in Diego Costa uu dib ugu laabtay Atletico Madrid.
Laakiin Costa oo aan waqti badan joogin Chelsea ayaa saamayntii uu Blues ku yeeshay waxa uu kaalinta labaad ka galay gool dhaliyaashii Blues ugu fiicnaa laga soo bilaabo 2000 kii.
Didier Drogba ayaa loo doortay gool dhaliyihii kooxda Chelsea ugu fiicnaa laga soo bilaabo 2000 kii laakiin waxaaba lagu tiriyaa kan taariikhda Blues ee abid ugu fiicnaa.
Drogba ayaa Chelsea u soo ciyaaray 381 kulan wuxuuna soo dhaliyay 164 gool isaga oo Blues kula soo guulaystay 14 koob waana xidiga weerarka Blues uga soo ciyaaray ee ugu saamaynta badnaa qarnigan 21 aad.
Drogba waxa uu ku suntan yahay koobka kaliya ee Champions League ah ee ay Chelsea ku soo guulaystay sanadkii 2012 kii waxaana loo tixgaliyaa xidigihii ugu fiicnaa ee Premier leugue soo maray qarnigan.